သင့်ကားကို စက်ဆီဘယ်လောက်ထည့်ဖို့ လိုသလဲ? - Optima Werkz Yangon
သင့်ကားကို စက်ဆီဘယ်လောက်ထည့်ဖို့ လိုသလဲ?
In General Knowledge, Oils
ဒါဟာ တကယ်တော့ လွယ်ကူတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါ။ Crankcase အများစုက ဆီပမာဏ5Quarts လောက် လိုအပ်ပြီး စလင်ဒါလေးခုနဲ့ အင်ဂျင်အသေးတွေကတော့ ဆီပမာဏ4Quarts လောက် လိုပါတယ်။ ပိုကြီးမားတဲ့ ထရပ်ကားတွေလို အင်ဂျင်တွေကတော့ ဆီပမာဏ6– 8 Quarts လောက်ထိ ဖြည့်ဖို့ လိုပေမယ့် ပုံမှန် V6 နဲ့ V8 အင်ဂျင်တွေကတော့ ဆီပမာဏ5Quarts အတွက် ဒီဇိုင်းဆွဲထားကြတာပါ။
မကောင်းပါဘူး။ မော်တော်ကား တော်တော်များများက စက်ဆီတစ်လီတာထက် နည်းနေရင်တောင် ဘာမှ ကြီးကြီးမားမား မထိခိုက်ဘဲ အချိန်တိုမောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်အင်ဂျင်အတွက်မဆို စက်နှိုးတဲ့ အချိန်က အရေးကြီးတာကို မမေ့ပါနဲ့။ စက်နှိုးလိုက်တဲ့အခါ တစ်စက္ကန့်၊ နှစ်စက္ကန့်အတွင်း လိုအပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဆီကို စက်ဆီ ရောက်သွားတဲ့အချိန်က အရေးပါတယ်။ Crankcase ထဲက ဆီပမာဏ အရမ်းနည်းနေရင် အဆိုပါ အစိတ်အပိုင်းတွေဆီ မြန်မြန်ရောက်ဖို့ မတတ်နိုင်ပါဘူး။
ဒါလဲ မကောင်းပါဘူး။ Crankcase ထဲမှာ ဆီအရမ်းများနေရင် ပန့်နဲ့ ကရိုင်းရှပ်တို့က လေသလပ်ခံလိုက်ပြီး အမြုပ်သဏ္ဍာန် ပြောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒါက အင်ဂျင်ရဲ့ လှုပ်ရှားနေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို ဆီပန့်ကြီး တစ်ခု အသွင်ရောက်သွားစေပြီး ဆီပန့်က စုပ်ယူတဲ့အခါ ဆီနဲ့အတူ လေပမာဏ အများကြီးကိုပါ ယူမိပါတယ်။ ဟိုင်းဝေးအမြန်နှုန်းနဲ့ဆိုရင် ကရိုင်းရှပ်နဲ့ အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေက တစ်စက္ကန့်ကို အကြိမ် ၂၀ လောက် လှည့်ပြီး လှုံ့ဆော်ပေးနေရတာပါ။ အမြုပ်ထနေတဲ့ စက်ဆီတွေက ဘယ်ရင်တွေနဲ့ စလင်ဒါနံရံတွေကို ကောင်းမွန်စွာ ချောမွေ့မှုပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အင်ဂျင်ကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်အင်ဂျင်က စက်ဆီပမာဏ ဘယ်လောက်လိုအပ်လဲ ဆိုတာ သံသယရှိနေတုန်းပဲ ဆိုရင်တော့ Manual ကိုဖတ်ကြည့်ပြီး ဆီတိုင်းတဲ့ တုတ်တံမှာ “တစ်လီတာဖြည့်” နဲ့ “ပြည့်ပြီ” ဆိုတဲ့ အမှတ်နှစ်ခုကြား ရောက်အောင် သတိထားပေးရင် အဆင်ပြေမှာပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဆင့်မြှင့်တင်ချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကားကျန်းမာရေးအတွက် စစ်ဆေးချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွမ်းကျင်သူတွေ ရှိတဲ့ Optima Werkz Yangon ဆီကို လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ကားအမျိုးအစား မျိုးစုံကို ကျွမ်းကျင်စွာ ပြုပြင်မွမ်းမံပေးနိုင်တဲ့ Optima Werkz Yangon ကိုဆက်သွယ်လိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် +95 9782626 888, +95 9782626 999 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Ref – https://shop.advanceautoparts.com/r/advice/car-maintenance/how-much-oil-does-my-car-need
ဒါဟာ တကယျတော့ လှယျကူတဲ့ မေးခှနျးတဈခုပါ။ Crankcase အမြားစုက ဆီပမာဏ5Quarts လောကျ လိုအပျပွီး စလငျဒါလေးခုနဲ့ အငျဂငျြအသေးတှကေတော့ ဆီပမာဏ4Quarts လောကျ လိုပါတယျ။ ပိုကွီးမားတဲ့ ထရပျကားတှလေို အငျဂငျြတှကေတော့ ဆီပမာဏ6– 8 Quarts လောကျထိ ဖွညျ့ဖို့ လိုပမေယျ့ ပုံမှနျ V6 နဲ့ V8 အငျဂငျြတှကေတော့ ဆီပမာဏ5Quarts အတှကျ ဒီဇိုငျးဆှဲထားကွတာပါ။
မကောငျးပါဘူး။ မျောတျောကား တျောတျောမြားမြားက စကျဆီတဈလီတာထကျ နညျးနရေငျတောငျ ဘာမှ ကွီးကွီးမားမား မထိခိုကျဘဲ အခြိနျတိုမောငျးနှငျနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘယျအငျဂငျြအတှကျမဆို စကျနှိုးတဲ့ အခြိနျက အရေးကွီးတာကို မမပေ့ါနဲ့။ စကျနှိုးလိုကျတဲ့အခါ တဈစက်ကနျ့၊ နှဈစက်ကနျ့အတှငျး လိုအပျတဲ့ အစိတျအပိုငျးတှဆေီကို စကျဆီ ရောကျသှားတဲ့အခြိနျက အရေးပါတယျ။ Crankcase ထဲက ဆီပမာဏ အရမျးနညျးနရေငျ အဆိုပါ အစိတျအပိုငျးတှဆေီ မွနျမွနျရောကျဖို့ မတတျနိုငျပါဘူး။
ဒါလဲ မကောငျးပါဘူး။ Crankcase ထဲမှာ ဆီအရမျးမြားနရေငျ ပနျ့နဲ့ ကရိုငျးရှပျတို့က လသေလပျခံလိုကျပွီး အမွုပျသဏ်ဍာနျ ပွောငျးလရှေိ့ပါတယျ။ အဲဒါက အငျဂငျြရဲ့ လှုပျရှားနတေဲ့ အစိတျအပိုငျးအားလုံးကို ဆီပနျ့ကွီး တဈခု အသှငျရောကျသှားစပွေီး ဆီပနျ့က စုပျယူတဲ့အခါ ဆီနဲ့အတူ လပေမာဏ အမြားကွီးကိုပါ ယူမိပါတယျ။ ဟိုငျးဝေးအမွနျနှုနျးနဲ့ဆိုရငျ ကရိုငျးရှပျနဲ့ အခွားအစိတျအပိုငျးတှကေ တဈစက်ကနျ့ကို အကွိမျ ၂၀ လောကျ လှညျ့ပွီး လှုံ့ဆျောပေးနရေတာပါ။ အမွုပျထနတေဲ့ စကျဆီတှကေ ဘယျရငျတှနေဲ့ စလငျဒါနံရံတှကေို ကောငျးမှနျစှာ ခြောမှမှေု့ပေးမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ အငျဂငျြကို ထိခိုကျနိုငျပါတယျ။
ကိုယျ့အငျဂငျြက စကျဆီပမာဏ ဘယျလောကျလိုအပျလဲ ဆိုတာ သံသယရှိနတေုနျးပဲ ဆိုရငျတော့ Manual ကိုဖတျကွညျ့ပွီး ဆီတိုငျးတဲ့ တုတျတံမှာ “တဈလီတာဖွညျ့” နဲ့ “ပွညျ့ပွီ” ဆိုတဲ့ အမှတျနှဈခုကွား ရောကျအောငျ သတိထားပေးရငျ အဆငျပွမှောပါ။
ကိုယျ့ရဲ့ကားနဲ့ ပတျသကျပွီး အဆငျ့မွှငျ့တငျခငျြတာပဲ ဖွဈဖွဈ၊ ကားကနျြးမာရေးအတှကျ စဈဆေးခငျြတာပဲ ဖွဈဖွဈ ကြှမျးကငျြသူတှေ ရှိတဲ့ Optima Werkz Yangon ဆီကို လာခဲ့ဖို့ ဖိတျချေါလိုကျပါတယျ။ ကားအမြိုးအစား မြိုးစုံကို ကြှမျးကငျြစှာ ပွုပွငျမှမျးမံပေးနိုငျတဲ့ Optima Werkz Yangon ကိုဆကျသှယျလိုရငျတော့ ဖုနျးနံပါတျ +95 9782626 888, +95 9782626 999 ကိုဆကျသှယျနိုငျပါတယျ။
No. 99, Than Lwin Road